Umphumo Wamehlo Emehlo
Ubuhle bomfazi Iifake Amehlo Amehlo otshayi
Ama-smoky Eye (ama "eyes smoky eyes") sele sele athandwa kakhulu kwaye, ngokucacileyo, akayi kuphuma kwifashoni. Isiphumo saso isohlwayo sinika ukubonakala kancinci, imfihlelo, ubulili, ... nantoni nawuphi na umfazi ozama ukufezekisa. Unokwenza njani ukuzenza ngokwakho ngaphandle kokuchitha ixesha elide kuyo? Apha uya kufumana imiyalelo yesinyathelo-nge-nyathelo eya kukunceda ukuba ufumane umphumo otshayileyo wokutshaya:
1. Lungiselela ijwabu leso
Into eyona nto kukuba imithunzi ebudeni bemihla ayifuni kwaye ayiyi kudibanisa kwi-eyelid ephezulu. Ukwenza oku, kuyimfuneko ukucutha ulusu. Sebenzisa "isiseko sesithunzi" esikhethekileyo. Ndiyabulela kuye, ukuzenzela kuya kuba ngenyameko, kwaye uhlale ixesha elide.
2. IPencil eye
Kule meko, kungcono ukusebenzisa ipensela yamehlo kunokuba u -eyeliner wamanzi . Inyaniso kukuba, ipencilisi ilala ilula kwaye ilula ukuthunjwa. Kwaye ukufumana umonakalo we-Smoky Eyes, kufuneka uphephe imigca ecacileyo. Zonke iinguqu kufuneka zibe zihamba kakuhle. Umgca kufuneka uhanjiswe kwi-eyeriyeli ephezulu ngokungangoko kunokwenzeka kumgca wokukhula kwee-eyelashes. Ngomda ongaphandle, umgca kufuneka ube mkhulu kwaye ube mncinci, njengoko usondela phakathi kweso. Musa ukuyizisa kwikona yangaphakathi. Emva koko i-makeup ngeke ibonakale icinezelekile. Umbala wepenseli kufuneka ukhethwe ngetoni kumbala wezithunzi.
3. I-eyelidi engaphantsi
Qinisekisa ukuzisa i-ileyeli yezantsi. Le ngenye yeemeko eziphambili zokufumana umphumo otshayayo otshayayo.
Ngenxa yoko, ungasebenzisa ipensela efanayo njengelinye ijwabu leso. Kodwa umgca kufuneka ube mncinci kwaye ukhanyise, ukwenzela ukuba ithoni yincinane.
Ungasebenzisa izithunzi ngokudweba umgca ococekileyo kunye nomfaki-sicelo okanye i-brush encane. Ukuphucula impembelelo, unako ukusebenzisa zombini. Okokuqala, udwebe umgca ngepensile, uze ube nomthunzi omncinane uze uyityebe ngezithunzi.
4. Faka isicelo sombala wesiseko
Enye imeko yokwenza iifom ephumelelayo i-Smoky Eyes - inhlanganisela yomthunzi omnyama kunye nomnyama. Kwaye umelekeko kufuneka ube yinto ebalulekileyo. Sidinga ukuguqulwa okulula, kodwa okubonakalayo. Ngenxa yoko, i-cream shadows are great, kodwa unokufezekisa umphumo oyifunayo ngoncedo lwezithunzi ezomileyo. Faka isicelo sokukhanya, izithunzi ezityebileyo phezu kwendawo yejwabu eliphezulu ukusuka kwiphondo ukuya kwi-eyebrow.
5. Gubungela umbala omnyama omnyama
Umbala omnyama kufuneka usetyenziswe kwi-eyelidi ephezulu yeselula. Wena. ukusuka kumgca wokukhula kwee-eyelas to the fold. Umbala wezithunzi kufuneka ube ngetoni yombala we-eyeliner okanye emnyama. Kufuneka bazuze kakuhle emaphethelweni enkulungwane, ukwenzela ukuba iipods zinyamalale. Iliso liya kuhlala likhethiweyo, kodwa umgca ocacileyo kumgca awufanele ubonakale.
Iphanga lesipuphu esiphambili ngumda apho izithunzi ezimnyama ziphela. Kodwa apha kufuneka ukhangele ngabanye. Ngokuxhomekeka kwisakhiwo sehlo, umda ungakhuphuka kakhulu.
6. I nqanaba lokugqibela
Umgca wokugqibela unemiqolo embalwa ye-mascara enikela ivolumu.
- khumbula ukuba umbala womlomo kufuneka ube yendalo okanye ulula. Ngenxa yokuba Ukufumba kwamehlo okutshaya kwenza amehlo aqaqambileyo, imilomo kufuneka "isuswe". Ukukhanya okufanelekileyo, ukukhanya okugqithisiweyo okanye umlomo. Imibala emihle: i-beige, i-pink pink, i-color-colored. Kwaye ngokubanzi, qaphela: kufuneka kubekho into enye yokuphuma. Ngamehlo, okanye ngomlomo. Kungenjalo ukufundwa kuya kuba yinto engcolileyo.
- Ukwenza i-makeup ingqongqo, ungasebenzisa i-mascara enemibala. Kuhle xa lifana nombala wamehlo. Oku kuya kunika ubunzulu bubonakale kunye nentsingiselo.
- ngokuba i-podvodki ayifuni ukusebenzisa ipensela. Ungathatha umfaki-sicelo obomvu okanye ibhontshi elincinci, udibanise emthunzini omnyama uze udwebe umgca. Unokwenza oku nangomthunzi owomileyo. Kule meko, i-podviku ilula kakhulu ukudibanisa. Naluphi na ukhetho olukhethiweyo, u-eyeliner kuyimfuneko!
- yeeNkohlakalo zeSwitoky eye kwimiqulu emnyama okanye ebomvu yiklasi. Kodwa nangona kunjalo ngeli xesha, ukulungiswa kwimibala emfusa kunye ne-golden brown kuya kuba yinyani.
I-TOP 10 Abadumileyo be-Eye:
1. UJennifer Lopez
2. Shakira Theron
3. UPenelope Cruz
4. U-Angelina Jolie
8. USarah Jessica Parker
Ukwenza izifundo zokutshaya amehlo
Iindidi ezahlukeneyo zeenwele
Iintlanzi zefestile ezintle kakhulu eziphathekayo kunye ne-bangs
Iifutha ezimanzi ezinonophelo - ukulungiswa kohlambuluko
Inkqubo enonwabo: i-chocolate
Imibala yeenwele: iimpawu kunye nezigaba
Ungazifumana njani ukuba uqalise
Iidraphe zokulungiselela izitya zokutya
Jam ukusuka kuma-crranberries
Yenza ubomi obutsha bubala
Ukhuselo lwe-IVF olukhuselekileyo
Iimveliso ezifudumalayo ngaphakathi ngaphakathi
Phula umzimba xa uhleli phambi kweTV
Umntwana unobumba obumnyama phantsi kwamehlo: izizathu kunye nonyango
I-Shrimps kwisuphu eshushu
Ukusela njani amanzi ngokuchanekileyo?
Ungayisebenzisa njani umhla wokuzalwa komntwana?
Ukuxhomekeka kwiziyobisi, iindlela zokunqoba
I-Mannick ngobisi kunye neebhanana